အဘယ်သို့ငါက TWITTER တွင်နာမည်ကိုပြောင်းပါဘူး - တွစ်တာ - 2019
တခါတရံအထူးသဖြင့်ဆဲလ်၌ရှိကြ၏မည်မျှဇာတ်ကောင်ကိုသိရန်လိုအပ်ကြောင်းရှိလာပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, သင်ရုံကို manually မှတ်, ဒါပေမယ့်အဘယျသို့လျှင် element တွေကိုအများကြီးနှင့်ရေတွက်တိကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အစဉ်အမြဲပြောင်းလဲနေတဲ့အကြောင်းအရာနှင့်အတူထွက်ဆောင်သွားစေသင့်သနည်းနိုင်ပါတယ် ရဲ့ Excel ကိုအတွက်ဇာတ်ကောင်များ၏အရေအတွက်ကိုရေတွက်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူကြပါစို့။
Excel ကိုအတွက်ဇာတ်ကောင်ရေတွက်ခေါ်ကြောင်းအထူး function ကိုရှိပါတယ် "LEN ထက်"။ ဒါဟာတစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဆဲလ်စာရွက်ထဲမှာနိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုမျှတမှုမှဖြစ်နိုင်င်း၏အကူအညီဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုနည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။
Method ကို 1: ဇာတ်ကောင်အရေအတွက်
တစ်ဦးကလာပ်စည်းတွင်တည်ရှိသည်အားလုံးနိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုတစ် count က, ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် function ကိုအသုံးပြုနိုင်သည် LEN ထက်, ဒါကြောင့်တစ်ဦး "စင်ကြယ်သောပုံစံ" တွင်, စကားပြောဆိုရန်။
၎င်းဒြပ်စင်ရေတွက်ရလဒ် output ကိုဖြစ်သင့်တဲ့စာရွက်ရွေးချယ်ပါ။ ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဟုအဆိုပါ Enter"ယင်းပုံသေနည်းဘား၏ဘယ်ဘက်ထိပ်မှာတည်ရှိပါတယ်။
Wizard ကိုစတင်သည် function ။ ကျနော်တို့ကနာမကိုရှာကြသည် LEN ထက် နှင့် button ကို click "အိုကေ".
ဒါက window ၏ဖွင့်အငွငျးပှားနေဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်။ တိကျတဲ့ဆဲလ်များ၏လိပ်စာ - ဤ function ကိုတစ်ဦးတည်းသာငြင်းခုံရှိပါတယ်။ ထို့အပွငျကအများဆုံးကိုအခြားအော်ပရေတာနှင့်မတူဘဲကဆဲလ်များ၏ဗဟုသို့မဟုတ်တစ်ခုခင်းကျင်းရန်ရည်ညွှန်း၏နိဒါန်းကိုထောကျပံ့မပါဘူးသတိပြုရပါမည်။ လယ်ပြင်၌ "စာသား" ကိုယ်တိုင်သင်ဇာတ်ကောင်ရေတွက်လိုသည့်အတွက်ဒြပ်စင်များ၏လိပ်စာရိုက်ထည့်ပါ။ သင်ကလွယ်ကူအသုံးပြုသူများအတွက်စေလိမ့်မည်ဟုကွဲပြားခြားနားလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအငြင်းအခုံလယ်ပြင်၌ရှိသော cursor Set များနှင့်ရိုးရိုးစာရွက်ပေါ်တပ်မက်လိုချင်သောအဧရိယာပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ။ ထို့နောက်၎င်း၏လိပ်စာ box ထဲမှာပုံပေါ်ပါတယ်။ ဒေတာထဲသို့ဝင်သောအခါ, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ".
သငျသညျ, ထို screen ပေါ်မှာပြသဇာတ်ကောင်များအရေအတွက်၏တွက်ချက်မှု၏ထို့နောက်ရလဒ်ကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့။
Method ကို 2: ကော်လံထဲမှာဇာတ်ကောင်အရေအတွက်
တစ်ကော်လံသို့မဟုတ်အခြား data တွေကိုအကွာအဝေးအတွက်ဇာတ်ကောင်များ၏အရေအတွက်ကိုရေတွက်ဖို့သေချာပေါက်တစ်ဦးချင်းတစ်ဦးချင်းစီဆဲလ်များအတွက်ပုံသေနည်းသတ်မှတ်မထားပါ။
ယင်းပုံသေနည်းဆဲလ်၏ညာဘက်အောက်ထောင့်ဖြစ်လာသည်။ အဆိုပါရွေးချယ်မှုကိုလက်ကိုင်ပုံပေါ်ပါတယ်။ လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ် Hold ကျနော်တို့ဇာတ်ကောင်များ၏အရေအတွက်ကိုတွက်ချက်လိုသည့်အတွက်ထိုဒေသတွင်မှစင်ပြိုင်ကဆွဲယူပါ။
Method ကို 3: AutoSum မှတဆင့်အကြိမ်ကြိမ်ဆဲလ်ထဲမှာဇာတ်ကောင်များ၏အရေအတွက်
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, အော်ပရေတာအငြင်းအခုံ LEN ထက် တစ်ခုတည်းဆဲလ်သာသြဒီနိတ်ပြုမူနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့သင်သည်ထိုသူတို့၏အတော်ကြာအတွက်ဇာတ်ကောင်များ၏စုစုပေါင်းငွေပမာဏကိုတွက်ချက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်? ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် AutoSum function ကိုသုံးစွဲဖို့အလွန်အဆင်ပြေသည်။
ဇာတ်ကောင်များ၏အရာအတွက်သတ်မှတ်ထားသောအရေအတွက်အကွာအဝေးကိုရွေးချယ်ပါ, ထို button ကို click "ငွေပမာဏ"အဆိုပါ tab မှာတည်ရှိပြီး "အိမ်" က Settings အပိုင်းအတွက် "တည်းဖြတ်ခြင်း".
ထိုနောက်မှအပေါငျးတို့သ element တွေအတွက်စုစုပေါင်းအမှတ်ကိုနောက်ရွေးချယ်ထားသောအကွာအဝေးရန်, သီးခြားဆဲလ်ထဲမှာဖော်ပြပါတယ်လိမ့်မည်။
Method ကို 4: ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်မျိုးစုံဆဲလ်ထဲမှာဇာတ်ကောင်များ၏ရေတွက်
အထက်ပါဖြစ်စဉ်တွင်ချက်ချင်းတစ်ခုချင်းစီကိုသီးခြားစီဒြပ်စင်များအတွက်တွက်ချက်မှုထွက်သယ်ဆောင်သင့်ပါတယ်, ပြီးတော့အားလုံးဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့အမှတ်စုစုပေါင်းပမာဏကိုတွက်ချက်။ သို့သော်ရှိသမျှသောတွက်ချက်မှုတစ်ဦးတည်းသာသူတို့ထဲကထွက်သယ်ဆောင်ထားတဲ့အတွက်မူကွဲရှိပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျအော်ပရေတာနှင့်အတူပေါင်းစပ်ပုံသေနည်းသုံးစွဲဖို့လိုအပ် ငှေပေါငျး.
= sum (LEN ထက် (adres_yacheyki1) LEN ထက် (adres_yacheyki2); ... )
လူအပေါင်းတို့သည်ဆဲလ်များ၏လိပ်စာများရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ပြီးနောက်က Enter တွက်ချက်ရန်လိုအပ်ပါသည်သောဇာတ်ကောင်များအရေအတွက်သည် button ကို click ENTER။ မျက်နှာပြင်နိမိတ်လက္ခဏာများအပြင်စုစုပေါင်းပမာဏကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြင်နိုင်ပါသည်သည်အတိုင်း, တစ်ဦးချင်းစီဆဲလ်တွေအတွက်သင်္ကေတများအရေအတွက်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, အကွာအဝေးဆဲလ်ထဲမှာဇာတ်ကောင်များ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကိုရေတွက်၏နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီဂျခုနှစ်တွင်စစ်ဆင်ရေးအတွက်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ထွက်ယူသွားတတ်၏ LEN ထက်.